Thola Amakhono Abasebenzi NgeHodges Direct, A Division of Hodges University
Categories: IHodges Direct
Uyemukelwa ku-HU Direct, i-Express Division yeHodges University
IHodges University inikezela ngezitifiketi eziqondiswe kwabasebenzi kanye neziqu ezidingeka esifundeni nakwamanye amazwe. Izindawo zifaka ukunakekelwa kwezempilo, ubuchwepheshe, ibhizinisi, ukuphathwa kanye nezezimali. Abafundi bangathatha amakilasi ekhampasi, ku-inthanethi, nangamakilasi ethu we-Technology Enhanced Classrooms (TEC), abavumela ukuthi baye ekilasini noma yikuphi, bahlala ku-inthanethi. IHodges University nayo inikeza okuvelele IsiNgisi njengohlelo lwesitifiketi soLimi Lwesibili (ESL).
Ukuqala ngendawo yeLehigh Acres Goodwill, i-HU Direct izokwazi ukuthola indawo yokufundela kanye nehhovisi lothisha, khona eLehigh Acres, e-CRC kaGoodwill. Amakilasi nemihlangano yokufundela ingabanjelwa emphakathini waseLehigh Acres ngezinsuku nangezikhathi ezifanele kakhulu izakhamuzi zomphakathi. IHodges University yaziwa ngokukhethekile ngabafundi abadala, yingakho izinhlelo eziningi zibanjwa kusihlwa nangezimpelasonto ekhampasi, noma online.
I-Alliance Engalindelekile - IHodges University kanye neGoodwill Industries
Ekuboneni kokuqala, kungabonakala sengathi iHodges University kanye Ama-Goodwill Industries aseNingizimu-ntshonalanga yeFlorida bekungeke kufane kakhulu. Kodwa-ke, zombili lezi zinhlangano zisebenza ngokubambisana, singakwazi ukubhekana kangcono nezidingo zokuqeqeshwa kwabasebenzi esifundeni sethu.
Kokubili iGoodwill neHodges University zisebenza kanzima ukuze zifinyeleleke, kepha kunenye indlela yokuyisa lokho ezingeni elilandelayo. Umusa unikeza isiqalo esinamandla kulabo abafuna ukuqala noma ukushintsha umsebenzi ngenxa yesiphithiphithi esidalwe yi-COVID-19. IHodges University yethule uhlelo olusha olubizwa nge-HU Direct, i-An Express Division yaseHodges University.
Lo mfelandawonye uletha amathuba amaningi okuqeqesha nawokufunda kubahlali, khona kanye emphakathini wabo.
Xhumana nathi namuhla ukuthola eminye imininingwane!
Ngabe i-HU iqonde kuwe?
Uma unentshisekelo yokwandisa amakhono akho okusebenza, i-HU Direct ingeyakho!
Yiziphi Izifundo Ezitholakalayo NgamaHodges Aqondile?
Amakilasi azotholakala ebusuku nangezimpelasonto eGoodwill Industries Lehigh Acres Community Resource Centers (CRC) Indawo. Izifundo zizofaka:
IsiNgisi Njengolimi Lwesibili
I-English Grammar Online
Umphathi Wokuqala Womugqa
Indlela eya kubunikazi bekhaya
Ochwepheshe Bokusekela Ngokuqondile
Umvuzo wethu omkhulu ukubona lokho kubukeka kwethemba nokuzethemba okusha njengoba abafundi bethola ulwazi namakhono amasha azobasiza ukuthi bafeze amaphupho abo. Kungumthelela omuhle ozoqhubekela phambili ezizukulwaneni ngezizukulwane.